PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - Iphuma ngale kwamatshe ezintabeni
Iphuma ngale kwamatshe ezintabeni
Isolezwe - 2018-05-18 - EZEZIMOTO -
Isuka ekhasini 4 Injini namandla
Ngaphansi kwebhonethi inenjini eyaziwayo ye-Isuzu eyi 3.0-litre four-cylinder intercooled turbodiesel engine kadizili.
Le njini etholakala emavenini iKB, inamandla angu-130 kW ne-torque engu-380 Nm. Bayigaxe i-gearbox eyi six-speed automatic transmission. Kodwa uma uthanda uyakwazi ukuyishintsha wena.
Izinhlobo ehlukene ngazo yi 4x2 ne-4x4. I-4x4, okuyiyo esithole ithuba lokuyivivinya, idonsa ngawo womane amasondo uma uyifake ku-4H noma uyifake ku-4Low range uma uhambe ezindaweni ezibhedayo.
Ngibe nenhlanhla yokuthi ngaphambi kokuyishayela ngihambe nge-Isuzu KB eyi-4x4 ngaleyo ndlela ngezwa ukuthi mkhulu umehluko phakathi kwazo.
Imu-X ine-suspension eyi five-link ngemuva eyenza ibe ntofontofo emgwaqweni. Ithule ngoba ayiwungenisi umsindo omkhulu wangaphandle. Lokhu kwenza ukuthi ngisho isisejubaneni ingezwakali. Amabhampi awazweli kakhulu ngaphakathi ngoba infotontofo.
Amandla ayo kuyezwakala ukuthi iyimoto enkulu ngoba ayigxumi ihlale kodwa uma isisemgwaqweni ovulekile iwubukhosi.
Ayigcini ngokuzihambela kalula emgwaqweni ovulekile kuphela kodwa nasogwadule iqwala amadwala iphume iphume ngale. Okwakho ukuyifaka ku-4L bese iyazihambela. Uma wehla endaweni uyifaka ku-Hill Descend Control bese iyazibambela yona amabhreki. (ungabheka i-video kwi-Instagram @fanelebengu noma kwiTwitter @fanelebengu). Ezokuphepha
Ngakwezokuphepha le moto ifika namabhreki e-ABS ane-Electronic Brakeforce Distribution ne-Emergency Brake Assist. Ine-Electronic Stability Control, Traction Control, Hill Start Assist neHill Descent Control.
Ibuye ibe nama-airbag ngaphambili kanjalo nama-curtain airbag.
Njengoba kade yethulwa eFree State ngoLwesine nangoLwesihlanu, ngeSonto ngiyibonile eyokuqala emgwaqweni eThekwini. Ukuthi lokhu kuyizinkomba zokuthi iToyota neFord kumele yini bathuke, kuyozwakala.
Kodwa kuyaziwa ukuthi lezi zingqungqulu zontathu zihlale zibanga esigabeni samaveni futhi nakulokhu zinkulu izinkomba zokuthi umbango usuzodlulela kumaSUV uma ubheka ukuthi i-Isuzu ikhiphe imoto esezingeni. Nenani lemu-X idlalela ngasezimbangini. Uma ubheka nje iFortuner i-2.8 GD-6 4x4 Auto Ibiza uR646 800. Amanani Isuzu mu-X 3.0 4x2 AT6 R568 000, 00 Isuzu mu-X 3.0 4x4 AT R629 100, 00 Ifika ne warranty ne-Isuzu Roadside Assistance yeminyaka emihlanu noma u-120 000km, iservice plan yeminyaka emihlanu noma u-90 000km ne anti-corrosion warranty yeminyaka emihlanu. Kumele iye kwisevisi njalo ngemuva kuka-15 000 noma izinyanga ezingu-12.